Koriinka uur jiifka | Zanzu
Uurku waxa uu gaadhaa 9 bilood (40 todobaad/ 280 maalmood).
1 ilaa 3 bilood
Ta bacrinsan ee unuga ukuntu waxa uu u kobcaa si degdeg ah. Ka dib 3 ilaa 6 todobaad, dhammaan qaybaha jidhka aasaasiga ah ayaa bilaaba inay koraan.
Ka dib 6 todobaad, wadnahu waxa uu bilaabaa inuu garaaco.
Xubnaha (sida maskaxda, dhuuxa lafta dhabarka, iwm.) ayaa kobca.
Xadhiga xudunta iyo mandheerta waa diyaar.
4 ilaa 6 bilood
Uur jiifku waxa uu u koraa degdeg oo maskaxda waxay kortaa wax badan. Uur jiifka waxa uu bilaabaa inuu dhaqaaqo, tusaale ahaan: qaloocida, laadista, qabashada. Uur jiifku waxa wuu liqi karaa, nuugi karaa oo hamaamsan karaa.
Ka dib 4 bilood, ummulisadaama dhakhtarka haweenka waxa uu kuu sheegi karaa adiga sinjiga ilmaha isagaa adeegsanaya altarasoonka. Waad dooran kartaa haddii aad doonayso inaad ogaato sinjiga uur jiifkaaga ama aanad doonayn.
Ka dib ilaa 5 bilood, waxaad dareemi kartaa dhaqaaqa uur jiifka.
Cidiyaha, maqaarka iyo timaha ayaa muuqda.
Uur jiifku waxa uu bilaabaa inuu wax maqlo.
7 ilaa 9 bilood
Uur jiifku waxa uu noqdaa 3 wakhti mid culus iyo labba jeer mid wayn.
Uur jiifku waxa uu kaydiyaa duxda si uu u diiranaado, boorootiinkana koriinka muruqa, kaalshiyamka koriinka lafaha iyo nafaqeeyayaasha kale sida xadiidka.
Maskaxdu waxay u kortaa si degdeg ah.
Sambabada waxay diyaar u yihiin neefsashada madaxa banaan ee dhammaadka uurka.
Uur jiifku wuu is rogaa oo caadi ahaan waxa uu hoos usoo rogaa madaxiisa wax yar ka hor ummulida.
Mowduuyo badan oo la xidhiidha Koriinka uur jiifka